AHOANA NY FANAVAOZANA NY WINDOWS 10 KINOVA 20H2, OKTOBRA 2020 VAOVAO FARANY! - WINDOWS 10
Ahoana ny fanavaozana ny Windows 10 kinova 20H2, Oktobra 2020 Vaovao farany!
Microsoft namoaka ‘ Windows 10 kinova 20H2 aka Oktobra 2020 Vaovao farany ‘Ho an'ny fitaovana mifanaraka aminy. Mitovy amin'ny famoahana teo aloha, ny fanavaozana ny fanavaozana ny Oktobra 2020 dia ho azo ampiasaina ho fanavaozana tsy voatery ary mila mitady ny manindry ny 'Misintona ary mametraka izao' ireo mpikaroka mba hametrahana ny fanavaozana ao amin'ny fitaovanao.
fanavaozana ny windows 10 mihitsoka amin'ny 99
Hevitra ato Anatiny FAMPISEHOANA 1 Raiso ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra 2020 1.1 Mpanampy fanavaozana Windows 10 1.2 Fitaovana famoronana haino aman-jery 1.3 Sintomy ny Windows 10 20H2 ISO rOA Windows 10 20H2 endri-javatra
Eto ny tompon'andraikitra Microsoft manazava ny fomba hahazoana ny windows 10 Oktobra 2020 hanavao ny fomba tsara.
Raiso ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra 2020
Ny fomba ofisialy handraisana ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra 2020 dia ny fiandrasana azy hiseho tampoka amin'ny Windows Update. Saingy azonao atao foana ny manery ny PC anao hampidina ny Windows 10 Version 20H2 amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny windows.
Alohan'izany dia alao antoka fa napetraka ny fanavaozana ny patch farany , izay manomana ny fitaovanao amin'ny Windows 10 Oktobra 2020 Vaovao farany.
Mankanesa any amin'ny fikirana Windows (Windows + I)
Tsindrio ny Update & Security,
Manaraka amin'ny fanavaozana ny fikandrana ary jereo ireo fanavaozana.
Hamarino raha mahita zavatra toa izany ianao Fampivoarana ny endri-javatra amin'ny Windows 10 kinova 20H2 .
Raha eny dia tsindrio ny rohy 'Download and Install now'
Haharitra minitra vitsy ny fampidinana ireo rakitra fanavaozana avy amin'ny mpizara Microsoft.
Ary avereno ny PC-nao hampiharana ny fanovana.
Raha manaraka ireo dingana ireo ianao ary tsy mahita ny “ Fampivoarana ny endri-javatra amin'ny Windows 10, andiany 20H2 ”Ao amin'ny fitaovanao, mety hanana olana mifanentana ianao ary hisy ny fiarovana raha tsy matoky izahay fa hanana traikefa fanavaozana tsara.
Rehefa vita ny fizotrany dia hampandroso anao ity Windows 10 manangana laharana hatramin'ny 19042.330
Raha mahazo ilay hafatra ianao “ Ny fitaovanao dia vaovao “, Avy eo ny kasainao tsy voalahatra handray ilay fanavaozana eo noho eo. Microsoft dia mampiasa rafi-pianarana milina hamaritana ny fotoana vonona ny handray ny fanavaozana ny PC, ao anatin'ny ampahany amin'ny fanavaozana ny dingana, ka mila fotoana kely vao tonga eo amin'ny masininao. Izany dia azonao atao ny mampiasa ilay ofisialy Windows 10 Assistant mpanampy na fitaovana famoronana haino aman-jery hametrahana fanavaozana ny Oktobra 2020 izao.
Mpanampy fanavaozana Windows 10
Raha tsy hitanao ny fanavaozana ny endri-javatra Windows 10 kinova 20H2, misy mandritra ny fizahana amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny windows. Io antony io amin'ny fampiasana Windows 10 Update Assistant no fomba tsara indrindra ahazoana ny windows 10 20H2 izao. Raha tsy izany dia tsy maintsy miandry ny fanavaozana ny Windows ianao mba hanompoanao ho azy ny fanavaozana ny Oktobra 2020.
Tsidiho ny Fampidinana rindrambaiko Microsoft pejy
Tsindrio ilay manga Vaovao farany izao bokotra
Ity dia hampidina ny Windows 10 Update Assistant.
Tsindrio havanana amin'ny fanavaozana ny fanampin-tanana Assistant.exe ary mihazakazaha toy ny mpandrindra.
Ekeo izy hanova ny fitaovanao ary kitiho ny Vaovao farany izao bokotra eo amin'ny farany ambany ankavanana.
Ny mpanampy dia hanao fanamarinana ifotony amin'ny fitaovanao
Raha ok ny zava-drehetra, tsindrio ny manaraka, hanombohana ny fizotry ny fisintomana.
Miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny Internetanao izany, hamita ny fizotran'ny fampidinana aorian'ny fanamarinana ny fisintomana, ny mpanampy dia hanomana ny fizotrany fanavaozana ho azy.
Aorian'ny famaranana ny fanavaozana dia araho ny torolàlana hamerenana amin'ny laoniny ny solosainao ary hamita ny fizotry ny fametrahana.
Ny mpanampy dia hamerina ny solosainao ho azy aorian'ny fanisana 30 minitra.
Azonao atao ny manindry ny bokotra 'Restart now' eo amin'ny farany ambany havanana mba hanombohana azy eo no ho eo na ny rohy 'Avereno indray avy eo' eo ambany ankavia hanemorana azy.
kisary wifi tsy mampiseho windows 10
Windows 10 dia hamakivaky ireo dingana farany hamaranana ny fametrahana ny fanavaozana.
Ary aorian'ny famerenana farany ny fanavaozana PC anao amin'ny windows 10 Oktobra 2020 fanavaozana ny 20H2.
Fitaovana famoronana haino aman-jery
Azonao atao koa ny mampiasa famoronana haino aman-jery Windows 10 ofisialy hanatsarana ny fanavaozana ny windows 10 20H2, tsotra sy mora.
Sintomy ny fitaovana famoronana haino aman-jery Windows 10 avy amin'ny tranokala fampidinana Microsoft.
Aorian'ny fisintomana-tsindrio havanana amin'ny MediaCreationTool.exe ary safidio ny fihazakazahana ho mpandrindra.
Ekeo ny teny sy ny fepetra ao amin'ny fikandrana Windows 10 Setup.
Safidio ny safidy 'Hanatsara ity PC ity izao' ary tsindrio ny 'Next'.
Ny fitaovana dia hisintona ny Windows 10 izao, hanamarina ireo fanavaozana ary hiomana amin'ny fanavaozana, izay mety maharitra fotoana fohy, miankina amin'ny hafainganan'ny Internet izany.
Raha vantany vao vita io fanamboarana io dia tokony hahita hafatra ‘Vonona hametraka’ eo am-baravarankely ianao. Ny safidin'ny ‘Tazomy ireo rakitra sy fampiharana manokana’ dia tokony ho voafantina ho azy, fa raha tsy izany dia azonao atao ny manindry ny 'Hanova izay tianao tazomina' hisafidianana anao.
Tsindrio ny bokotra 'Install' ary tokony hanomboka ny fizotrany. Hamarino tsara fa nitahiry sy nanidy izay asa nosokafanao ianao alohan'ny hamelezana ity bokotra ity.
Ny fanavaozana dia tokony ho vita afaka fotoana fohy. Rehefa vita dia hapetraka amin'ny solo-sainanao ny windows 10 version 20H2.
Sintomy ny Windows 10 20H2 ISO
Raha mpampiasa za-draharaha ianao ary te-hanao fametrahana madio, azonao atao ny mampiasa ny rohy etsy ambany mba hisintona sary ISO feno an'ny Windows 10 kinova 20H2 avy eo mamorona haino aman-jery ara-batana (USB drive na DVD) amin'ny fanaovana a mametraka madio .
Windows 10 20H2 endri-javatra
Toy ny mahazatra ny fanavaozana ny endri-javatra Windows 10 dia mitondra fisongadinana sy fanatsarana vaovao hamelombelona ny OS, ny fanavaozana ny volana oktobra 2020 koa dia manolotra endrika vaovao marobe izay ahitana ny Redesigned Start Menu, bara fitadiavana namana azo ifandraisana kokoa, ny fahaizana manitsy ny tahan'ny fanavaozana fampirantiana, Microsoft Edge miorina amin'ny Chromium ho toy ny browser defaultary maro hafa.
Ny iray amin'ireo fanovana hita maso indrindra amin'ny fanavaozana Windows 10 20H2 dia ao amin'ny Start Menu. Mahafantatra lohahevitra izao ny Start Menu Tiles, izay midika fa miova ny fiaviany araka ny lohahevitra maizina na maivana.
Nesorin'i Microsoft izao ny valiny miloko matevina ao ambadiky ny kisary ao amin'ny lisitry ny fampiharana ary nanampy background translucent ao ambadiky ny tile.
Ny fanavaozana 20H2 izao dia ahafahanao manova ny tahan'ny fanavaozana ny fampisehoana anao, izay azo idirana ao amin'ny Windows Settings> System> Display.
Ireo sary masina efa voafintina ao amin'ny Bara-tsanganana dia miova arakaraka ny mpampiasa. Ohatra, ny mpampiasa Windows mifantoka amin'ny lalao dia hahita ny fampiharana Xbox, raha toa kosa ka misy olona manana fitaovana Android mifandray dia ho hitany ao amin'ny Taskbar ny app anao.
Ny fanavaozana ny windows 10 20H2 izao dia halefa miaraka amin'ny Microsoft Edge vaovao miorina amin'ny Chromium (ampiasain'ny motera Chromium loharano misokatra) ho toy ny browser tsy misy fangarony.
windows 10 kinova 1903 iso
Ny hitsin-dàlana fitendry ALT + Tab, avelao hifamadika haingana eo anelanelan'ny apps izao ny orinasa dia nanampy ny fahafaha-mifindra eo anelanelan'ny tab sy ny navigateur Edge amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana mitovy amin'izany.
Afaka mamaky ianao Windows 10 kinova 20H2 endri-javatra lisitra eto.
Azonao atao ny mamaky ny lahatsoratray natokana
Nanjavona i Microsoft Edge taorian'ny fanavaozana ny windows 10? Eto ny fomba famerenana azy
Setup And configure server FTP amin'ny Windows 10 Torolàlana tsirairay
Ahoana ny fomba ahafahana mamela ny lohahevitra maizin'ny File Explorer amin'ny Windows 10 kinova 20H2
Ahoana ny fomba hanatsarana tsara ny fahombiazan'ny Windows 10 ho an'ny lalao
Mpanampy Windows 10 fanavaozana nikatona tamin'ny 99%, Eto ny vahaolana 5 azonao andramana
tapaka Internet tampoka ny Internet
solosaina tsy mahita ethernet tariby windows 10
windows 10 login kurs mainty fidirana
fanavaozana ny endri-javatra ho an'ny Windows 10 kinova 1903 niraikitra tamin'ny 99
breakpoint breakpoint breakpoint dia nahatratra 0x80000003
iTunes tsy afaka nifandray tamin'ity iphone ity. nisy lesoka tsy fantatra (0xe800000a)
exe mankany apk mpanova ho an'ny android